Sweden oo Caawa ku Dhawaaqday Sharciyo Cusub oo ku aadan Dadka Safarka ka imaanaya
HomeWararka MaantaSweden oo Caawa ku Dhawaaqday Sharciyo Cusub oo ku aadan Dadka Safarka ka imaanaya
December 1, 2021 Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Maamulka caafimaadka Sweden ayaa fiidnimadii caawa ku dhawaaqay in dhammaan dadka safarka ah ee ka imaanaya dalalka aanan aheyn ama ku oolin Waqooyiga Yurub ay tahay in la marsiiyo baaritaannada Corona, taasoo ku soo beegantay faafitaanka Coronaha cusub Omigron.
Sharuudaha Cusub ayaa ka dhigan in Dadka kasoo Safraya Africa ee Wadanka ee soo galaya in Corona iska qaadaan marka ay Dalka soo gaaraan.
Talooyinka cusubi waxay khuseeyaan qof kasta oo marka laga reebo caruur yar yar.
“Waxaan aragnaa faafitaan degdeg ah oo Omicron waddamo badan,” Karin Tegmark Wiesel, Agaasimaha Guud ee Hay’adda Caafimaadka Sweden, ayaa ku sheegtay war-saxaafadeed. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la qaado tillaabooyin badan si loo awoodo in la ogaado kiisaska goor hore, si tallaabooyinka xakameynta caabuqa loo hirgeliyo.
Waxay tilmaantay in Hay’adda caafimaadka dadwaynuhu ay si dhow ula socoto isbeddellada cusub, laakiin loo baahan yahay aqoon dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka kala duwanaanshaha fayraska, sida ay sheegtay Wiesel.
Waxay intaas ku dartay, “Waxa ugu muhiimsan ee qof kasta uu sameyn karo si uu uga hortago Covid-19 iyo cawaaqibkiisa, iyadoon loo eegin beddelka beddelka ah, waa inay isku tallaalaan tallaalka.”